साहित्य Archives - Page 35 of 36 - Samudrapari.com
मैले पनि भुल्याछैन तिम्रो हाम्रो चोखो प्रीत दुवै मिली गाएका थियौ स्टेजमा संगै गित आज भेट्न धेरै गाह्रो यस्तै रहेछ हाम्रो रित बिहानीको शितजस्तै रहेछ हाम्रो चोखो प्रीत तिमि थियौ मनको राजा म तिम्री रानी मैले भुल्न सक्याछैन तिम्रो आनीबानी तिमि थियौ मेरो लागि ममताको खानी त्यसैले त तिमिनै छौ दुइआंखाको नानी तडपिएर कति बसे तिम्लाई पाउन मैले कल गर्नलाई मोबाईल थिईन म संग पहिले धेरै सोचे धेरै सम्झे तिम्रो घरसम्म गए तिमीलाई नभेटेर छटपटीमा बेहोस् भए &nb...
रोजीमा बन्ने ध्रुबताराको
हाम्रो नेपाली समाजकी कमजोर चेली कठोर बनावटी संसारबाट बिदा भइन् मन बाँधेरै बाहिर हासी खेली भोकै भोकमा पनि भो-भो टन्नै छु म भन्थिन् रोगै-रोगमा पनि मलाई केही भा'छैन सन्चै छु म भन्थिन् तर सँधै आफैँ भित्र-भित्र रन्थनिन्थिन् घर, परिवार गाउँ समाजमा समेत कसैको मुहारमा आक्रोस देख्दा डर र त्रास उनीलाई नै हुन्थ्यो कमजोर मुटु लिएर पनि रोकथाम उनी गर्थिन् बिना स्वार्थ पनि अर्काको विजय खुशियालीमा दिल खोलेर हाँस्थिन् कसैले केही दिँदा पहिले उसको मर्का सम्झी करकापले ...
काठमाडौं- नइ प्रकाशनले विविध क्षेत्रमा समर्पित भई आआफ्ना ठाउँबाट प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्ष्ट्रिय क्षेत्रका एघार जना प्रतिभालाई २०६८ सालको नइ पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यी पुरस्कार जनही बीस हजार रूपियाँ राशिका छन् । नइ प्रकाशनका अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा प्रसाईको अध्यक्षतामा बसेको नइ प्रकाशनको पूर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको हो । नइ चन्द्रधन पुरस्कार धर्मसंस्कृतिको सम्वर्धन, संरक्षण र जागरणमा समर्पित जगदगुरू श्री बालसन्त मोहनशरणदेवाचार्यलाई समर्पण गर्ने निर्णय गरेको छ । ...
म नयाँ इतिहास बनेपछि धूवाँको कम्मल ओढेर अभियुक्तको बन्द कोठामै आश्वासनको अक्सिजनमा रात गुजार्न बाध्य भएको छु । कालो प्रतिबिम्ब सम्झेर धमिलो तुवाँलोभित्र खिया लागेको दिन समय अतीत बन्दै छ, म बिर्संदै छु । वषौर्ंअघिको स्मृतिलाई नभोग्दा असत्य लाग्ने, भोग्दा तुहाउन खोज्ने नसा-नसामा रगत हैन पानी जमाएर राखेको छु । दन्त्यकथा जस्तो लाग्ने मेरो रुँगाइ, भोगाइ पटक-पटक मस्तिष्कज्वरो जस्तो दोहोरिँदै घोरिँदै काला भित्तामा चित्र हेरिरहेको छु । - चौलाखर्क-३, सोलुखुम्बू
काठमान्डूमा ‘डायस्पोरिक साहित्य’बारे चर्चा
काठमाडौं- साहित्य सन्ध्याको ३०९ औँ नियमित मासिक कार्यक्रममा 'डायस्पोरिक साहित्य'का बारेमा चर्चा गरिएको छ । समालोचक सहप्राध्यापक नेत्र एटमले आफ्नो मुलुक छाडेर विभिन्न कारणले राहदानी प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गरी अर्काे मुलुकमा गई बसोबास गर्ने र आˆनो भाषाशैली, रहनसहन तथा संस्कारसंस्कृति जोगाउँदै साहित्य सेवा गर्ने साहित्यकारका रचनालाई डायस्पोरिक साहित्य भनिने गरेको उल्लेख गर्दै विदेशमा बसेर डायस्पोरिक साहित्य रचना गर्ने स्रष्टाको योगदान उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो । सन्ध्याका अध्यक्ष राम विनयले साहित्...
म मानिसहरुको खोजाइमा यति पुगेछु मेरो बचपन पनि शायद अरुका लागि अभिशाप भयो मेरो शब्द विश्वास गर्नेहरुको कमी भयो जुन चीज मैले आभाष गरिरहेछु कि के म त्यस मानिससित आकषिर्त वा केही मलाई पीडा भइरहेछ मेरो घरका अग्रजलाई समेत यसमा सामेल गरेको रहेछ मलाई पालेको आभाष भयो साच्ची नै मलाई हरेक मानिस दिइराखेका छन आजकल मैले बोलेका हरेक शब्द विश्लेषण गर्न पुग्ने गरेकेा छु मेरो शब्दले अरुको प्रत्युत्तर पनि हेरिरहेछु मैले आफ्नो प्रेमलाई त सधै लुकाउने खोजे यी लोग्ने मानिसहरुसाग जोड्दा म थाकिसके मेरो आर्...
बिन्ति छ पशुराज पशुहरुको पछाडी नलाग है बरु पशुहरुको पालन पोषण सुरु गर है किनभने पशुहरु पनि तिमि जस्तै प्राणी हो त्यसले त तिम्रो र पशुको काम गराई एकै हो तिमि त पशुको पछाडी लागि पशु समान भएछौ बिदेशीको कुटाईले स्वास्नी छोडी भागेछौ पैसाको लागि साथी भाईलाई भन्दैनौ आफ्नै हितैसीलाई मार्न पछि पर्दैनौ कस्तो कुलंगार, बेबेकुफ र मक्खीचुस भएछौ गुहुको सीक्का पनि दातलेनै टिप्न थालेछौ छि धिकार छ गाउले हरुले के भनि रहेछन तिम्रै बहादुरीको प्रशंशा गरि हासी रहेछन् अझै हसाउ र नचाउ ति तीम...
म हिंडेको बाटो छोटो होस् म कुदेको लक्ष्य नजिकै होस् किनभने मेरी कान्छी यती बेला म हिंडेको बाटोमा म कतै देखुन्छु कि भनी हेर्दाइ होली मेरी कान्छी यतिबेला मैले सो चे को लक्ष्यमा म पुगे कि भनी अनुमान लगाउुदै होली। त्तर किन त्यस्तो हुन्थ्यो र! म त धेरै लामो बाटो पो हिंड्न पुगे खोलाको डिलैमा उुभिएर मेरी कान्छीले कती नापी होली मेरो पद चाप त्तर किन स हज हुन्थ्यो र! बारीको छेउनेर उभिएर कती बि ताई होली समय मेरी कान्छीले सम्झदै मेरो बाङो तिङो लक्ष्य। मेरो नमिलेको जिउुडाल मा मेरो नकोरेको क...
दरबार र झुप्रो
के दरबार अब झुप्रो बन्छ त ? या झुप्रो दरबार जस्तै बन्छ त ? आन्दोलन आयो हट्यो दरबार अब झुप्रो चाहीँ के हुन्छ त ? ... नाम बदलियो दरबारको के झुप्रोको नाम पनि बदलिन्छ त ? दरबारबाट निस्कनेलाई दिएको सुरक्षा के झुप्रोमा बस्नेलाई मिल्छ त ? ... इतिहास पढियो दरबारको के झुप्रोको पाठ पनि पढाईन्छ त ? छोडीएको दरबारभित्र अनगिन्ती झुप्रोहरुलाई सजाइन्छ त ? ... दरबारको भविष्य सकियो भन्छन् झुप्रोको भविष्य कतातिर ? दरबार निभेपछी झुप्रो बल्छ की या दुबै जाने हो अन्धकार तिर ? ...
शव नभेटिँदै दाहसंस्कार
सउल– अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणमा हराएका दक्षिण कोरियाका पर्वतारोही पार्क यङ सकको राजधानी सउलमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ । हिमालमा पुरिएर मृत्यु भएको आशंकामा उनको अन्तिम संस्कार गरिएको हो । उनीसँगै सिन् दोङ मिन र खाङ गी सक् नामका पर्वतारोही पनि पुरिएका थिए । अहिलेसम्म खोजी गर्दा पनि शव नभेटिएपछि अन्तिम संस्कार गरिएको हो । दक्षिण कोरियाको राजधानी सउलको सउल युनिभर्सिटी हस्पिटलको दाहसंस्कार भवनमा करीब ५०० जना पर्वतारोहीहरुको उपस्थितीमा मृतकहरुको फोटो राखि विधिवत दाहसंस्कार गरिएको थियो । उनको टोलीले पछ...